MUSHARAX JAMAAL AFAR XAARAAMOOD AYUU XALAASHADAY-Qaybtii-3 | Maalmahanews
MUSHARAX JAMAAL AFAR XAARAAMOOD AYUU XALAASHADAY-Qaybtii-3
March 21, 2016 - Written by admin
Jamaal waxuu habeen iyo maalin ka hadlaa cadaalad iyo ilaalinta shuruucda dalka,waxuuna hormood kayahay jabintooda.Waxaynu sooshegnay sida uu u jabiyey shuruucdii labada xisbi ee UDUB IYO UCID. Sida uu uga jeclaaday dariiqa xaaranta ahkan xalaasha ah ee uu ku furan lahaa urur amba uu mari lahaa sharciga u dejisan xisbiyada,inta uu lacag xaaran ah u adeegsanaayo iyo heshiis uu la gelaayo qof amba koox danno gaar ah ay wadaagaan.
Maanta aan eegno sharcigu waxa uu ka qabo is sharaxaadiisa. Dastuurkeenu waxa uu caddeynayaa inaanu u tartami Karin nin haysta dhalasho ka baxsan tan Soomaliland doorashada Madaxweyna iyo Madaxweyne xigeenka. Waxa kale oo uu qabaa.oo ku cad dastuurka shuruud ah inuu qofka loo dooranayaa yahy ruux la socday oo xaqiiqda dalka ka jirta ka war hayey. iyo inuu uGu yaraan muddo laba sano ah si joogta ah u degan yahay. Jaamaal marna afar bilood dalka kuma qaadan, hawl kana qaban aan ahyn tan xaraanta ee shanta sano uu ina leeyahy waxaan ahay murasha. Iyadaa shaqo u noqotay.
Bal aan idiin soo naqilo qodobada dastuurka sida ay u qoran yihiin.
8- Waa in uu xog-ogaal u ahaadaa xaqaa’iqda dalka ka jira/jiray, wakhtina joogay, isaga oo intii dalka lagu soo noqday ka joogay ugu yaraan muddo laba sano ah (2 years).
Haddaba ninka sida badheedhka ah u baal marsan dastuurka, shuruucda xisbiyada, iyo xuquuqda siyaasadeed ee muwaadinku, hadduu dalka kuxumo sow xaarantu xalal noqonmeyso, oo ruux waliba baal marimaayo sharciga iyo dastuurka. Maxaad ka sugaysa een ahyn sharci jebin iyo ku tumasho dastuur illeyn waxa uu ku guulaystay jebin dastuur iyo ku tumasho sharci.
LA SOCO XARAANTA AFRAAD OO KA CULUS SEDDEXDAN HOREBA….